राजविराजमा अन्तिम चरणको कसरत
स्थानीय तह निर्वाचन नजिकिएसँगै सप्तरी सदरमुकाम राजविराज नगरापालिकामा मत आ–आफ्नो पक्षमा पार्न राजनितिक दल र तीनका उम्मेदवारहरु अन्तिम चरणको प्रयासमा जुटेका छन ।
मौन अवधी शूरु हुनु अघि नै उम्मेदवारहरु चर्काे गर्मीका बाबजुद पनि मतदाता नजिक धमाधम पुग्न थालेकका छन् ।
गत स्थानीयतहको निर्वाचनमा नगर प्रमुख पदमा यहाबाट तत्कालीन राजपाका उम्मेदवार शम्भु प्रसाद यादव निर्वाचित भएका थिए । उनले अर्का मधेशवादी दल संघिय समाजवादीका भिमराज यादवलाइ १३ मतको झिनो अन्तरले पराजित गरेका थिए ।
अहिले फेरी दुबै जना आमनेसामने भएका छन । तर यस पटक शम्भु प्रसाद यादव पार्टी परिर्वतन गरी नेकपा माओवादी केन्द्रको तर्फबाट उम्मेदवार बनेका छन् भने भीमराज यादव जसपाको तर्फबाट चुनावी मैदानमा छन् ।
नेपाली काँग्रेसले युवा जुझारु नेता इर्साद अन्सारीलाई प्रतिस्पर्धामा उतारेको छ । यसले काँग्रेसलाई चुनावमा उत्साहित पारेको छ । “हामी निरन्तर मजबुत बन्दै गएका छौं, काँग्रेसका नगर प्रमुख पदका उम्मेदवार अंसारीले भने–यस पल्ट मधेश आन्दोलनको राप र ताप खासै छैन, नगरवासीले परिर्वतन र विकास काँग्रेसले नै गर्न सक्छन भन्ने बुझेका छन ।”
उनले आफ्नो प्रतिस्पर्धा जसपाका भीमराज यादवसंग रहेको बताए । जसपाका भीमराजले जसपा प्रति नगरवासीको मोह अझ कायम रहेको र केही दिन यता यस पार्टीमा जोडिनेको संख्या पनि बुद्धि हुदै गएको बताउदै जित्ने दाबी गरे । “संगठनको मामिलामा पनि अहिले काँग्रेस भन्दा निकै बलियो छौं, उनले भने –जितको अन्त्यन्त नजिक छौ । यद्धपी काँग्रेस नै निकटतम प्रतिद्वन्दी हुने अनुमान गरेका छौं ।
नगरवासीले भने यहाँ प्रमुख राष्ट्रिय राजनीतिक दलहरु बीच नै मुख्य प्रतिष्पर्धा हुने बताइरहेका छन् । लोसपाका दिपेन्द्र चौधरी र नेकपा माओवादी केन्द्रका शम्भु प्रसाद यादव, नेकपा एकीकृत समाजवादीका नथुनी दास पनि कोण सभा र घरदैलो कार्यक्रमलाई तिब्रता दिदै जीतको नजिक पुग्न प्रयासरत छन् । उनीहरु पनि आ–आफ्नो जीत हुने दाबी गरिरहेका छन् ।
यहा एमालेबाट अनिल झा, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट उमेश साह, नेपाल प्रगतिशिल पार्टीबाट अशोक साह, जनमत पार्टीबाट ममता झा पनि प्रमुख पदमा उम्मेदवारी दिदै चुनावी मैदानमा छन । सबैले नगर विकासको साझा मुद्दालाई नै अघि सारेका छन । सबैले आ–आफ्नै दाबी गरे पनि कसले बाजी मार्ला ? भन्ने बारे अहिले निकै तर्क विर्तक र वहस हुन थालेको छ ।
यता उम्मेदवारहरु रंगी चंगी झण्डा बोकेर टोल टोलमा कार्यकर्ता साथ नाचगान गर्दै मत माग्ने गरेको दृष्य दिनभर देखिने गरिएको छ । चर्काे घाममा दिनभरीको थकान मेट्न नपाउदै राती अबेर सम्म कार्यकर्ता भेटघाट, कोठे बैठक र कपि कलम, क्यालकुलेटर राखेर कुन वडाबाट कस्को कती मत आउने र थप मतको जोगाड कसरी गर्ने भन्नेबारे हिसाब किताब समेत हुने गरेको विभिन्न दलका उ्रम्मेदवारका समर्थकहरुले बताएका छन् ।
यहाँको निर्वाचनमा जातीय मतले पनि ठुलै प्रभाव पार्ने गरेको छ । एक उम्मेदवारले भने “त्यसैले कुन जातीको कती मत हो ? त्यसको पनि डाटा संकलन र हिसाब किताव गरि सम्बन्धित जातीका अगुवालाई परिचालन गर्ने काम भईरहेको छ । राजविराज नगरपालिकामा नयाँ थप सहित ४० हजार ३६ मतदाता छन् । १६ वटा वडा रहेको राजविराज नगरपालिकामा ३० बैशाखमा हुने निर्वाचनका लागी नगरक्षेत्र भित्र २७ वटा मतदान केन्द्र कायम गरिएको जिल्ला निर्वाचन कार्यलय सप्तरीले जनाएको छ ।